Accueil > Gazetin'ny nosy > Filohampirenena : Sahia manova ny lalampanorenana
Miseho lany indray ny fanehoan-kevitra isan-karazany amin’izao fotoana. Raha jerena amin’ny ankapobeny dia ny sokajin’olona ivelan’ny fitondrana, milaza ho tsy mitovy fijery amin’ny mpitondra (fa tsy voatery ho mpanohitra) no matetika miseho manazava hevitra. Na inona na inona aloha ambara dia endrika iray isehoan’ny fahalalahana maneho hevitra ihany izany.
Saika fanakianana sy fitsikerana ny fomba fitantanan’ny mpitondra ny ankamaroan’ny hevitra hazavain’izy ireny. Tsy tokony hatao mahagaga izany satria izay no fomba fanaovana politika. Izahay tsy hamaritra an’ireny olona ireny ho “mpanohitra” mihitsy aloha hatreto satria ny foto-kevi-dehibe ijoroan’izy ireny sy voiziny dia mitovy tsy misy valaka amin’ny itompoan’ny mpitondra. Tsy inona izany fa ny fiankinan-doha amin’ny any ivelany, ka na hanitsakitsahana ny fiandrianampirenena aza dia ikimpiana.
Hatreto kosa aloha dia afaka miteny koa izahay fa tsy misy endri-panakorontanana miseho fa ny olona sasany miara-dia amin’ny mpitondra na ny te hanosika ny mpitondra hanaotao foana no milaza fa “fanakorontanana ireny fanehoan-kevitra ireny”. Aoka hazava ny resaka.
Na inona koa anefa na inona ataon’ny olona ivelan’ny fitondrana, na hanakorontana izy na haneho hevitra fotsiny, dia iantsorohana andraikitra ny mpitondra hitandro mandrakariva ny filaminana sy ny rindram-piainana ara-piaraha-monina ankapobeny. Izay ilay antsoina hoe “maintien de l’ordre public”. Raha mpitondra tsy afaka mifehy ny mety ho fikorontanan’ny fiainam-piaraha-monina, na inona iavian’izany na inona, dia tsy mendrika ho mpitondra izy.
Tsy tokony hadinoina koa fa ny zava-nisy teto amin’ny tany sy ny fanjakana hatrizay ange ka ny mpitondra no manakorontana isanandro, mandavan-taona ny fiaianam-bahoaka e! Mitady ny fomba handaminany ny fiainany ny vahoaka, na ny fidangan’ny vidim-piainana io na ny tsy fisian’ny fandriampahalemana, ny tsy fahalavorarian’ny fepetra takian’ny fampianarana ny zanany, ny teboka rehetra tokony hivainganan’ny fiahiana ny fahasalaman’ny ambanilanitra nefa tsy hita voaka, ny fiantohana ny fotodrafitrasa etsy sy eroa mba hiantoka ny fampihodinana andavanandro ny fiainam-bahoaka nefa poaka aty… sy ny sisa tsy ho voatanisa. Andraikitrry ny fanjakana ny miantoka ny fandavorariana izany rehetra izany ka rehefa tsy vitany izany dia korontana isanandro sy mandavan-taona no miseho eo anivon’ny fiainam-bahoaka.
Noho izany, misy fotoana ahitan’ny vahoaka fa tena mihoatran’ny azo ikombonam-bava ny fikorontanam-piainany, noho ny tsy fahavitan’ny fanjakana ny andraikiny, noho ny tsy fahatanterahan’ny mpitondra fanjakana ny adidiny, noho ny tsy fahaizan’ny mpitondra mitantana fanjakana, noho ny fanararaotam-pahefana ataon’ny mpitondra sasany, sy ny sisa tsy ho voatanisa, dia voatery midina an-dalambe ny vahoaka fa iny no endrika faran-tampony farany hitany fa hahafahany mifehy ny mpitondra mba hampiharan’ny mpitondra ny frepetra rehetra takian’ny fandaminana ny fiainam-bahoaka ankapobeny. Tsy fisamborana olona izany na fitifirana olona fa fandraisan’ny fanjakana ny fomba rehetra hiantohana ny fampihodinana ny fiainam-piaraha-monina mba hisongadinan’ny fisitrahan’ny vahoaka ny anjara-masoandrony.
Ka amin’izao fotoana, tsy hoe mikorontana ambony ambany akory ny fiainam-bahoaka fa misy olana mavesatra tsy ahafahan’ny ambanilanitra mioitra. Mitana anjara-toerana goavana amin’izany, izay tena mitambesatra be aminy, ny akon’ny aretina coronavirus. Tsy eto amintsika eto Madagasikara ihany fa saika maneran-tany. Noho izany, azo atao ny manipika fa “zary miainga amin’ny aotra (samy depart zero) ny firenena tsirairay avy izao. Ka mba hahafahantsika Malagasy tsy ho tratra farany, ilaina ny mametraka lamina vaovao hifampitondrana sy hifampifehezana mba hiantohana ny tena fanavotam-pirenena sy fanarenana ny fiainam-bahoaka, izay amin’ny alalan’ny fampivoarana matotra ny famokaran-karena eto.
Iray amin’ny teboka voalohany takian’izany ny fanovana ny lalampanorenana ka tokony hanam-pahasahiana hiroso amin’izany ny filohampirenena.
Marina fa tsy afaka hiantoka ny tena fidinan’ny vidim-piainana io, na antoka tena hampiakatra haingana ny vidim-bokatry ny tantsaha, na hanarina avy hatrany ny faripiainan’ny mpiasa na hampiroborobo avy hatrany, miaraka amin’ny vava, ny seha-pihariana na indostrialy io na varotra na fambolena na fiompiana na jono na asa-tanana…, fa fepetra iray hahafahan’ny mpisehatra rehetra miara-mandray anjara amim-pahavitrihana amin’ny fanarenam-pirenena. Tsorina fa tsy ahitana taratra an’izany io lalamppanorenana mihatra ankehitriny io.
Ny fomba hanatanterahana an’izany fanovana ny lalampanorenana izany dia azo anokafana ady hevitra satria tsy tokana ny fomba azo irosoana amin’izy io.